Nzvimbo dzakanakisa dzekutsvedza muAndorra neSpain | Absolut Kufamba
Nzvimbo dzakanakisa dzekutsvedza muAndorra neSpain
Absolut Kufamba | | the national
Mushure mekuguma kwezhizha, inguva yekufunga nezve edu anotevera getaways. Nekudaro, pakati peakasiyana akasiyana epo aripo mikana isarudzo ye pedza mazuva mashoma uchinakidzwa nechando nekusvetuka muzviteshi zvakasiyana muAndorra kana Spain.
Sezvo zvisiri nyore nguva dzose kutaura nechiteshi chakatarwa, pazasi iwe unozogona kuziva rumwe ruzivo rweakanakisa nzvimbo dzekutenderera kumatunhu aya.
Grandvalira ski resort inosiyana kubva kune vamwe nekuve chikuru pane zvese zvePyrenees. Inowanikwa mune Hukuru hweAndorra, parizvino ine anopfuura makiromita mazana maviri ematombo echikepe. Imwe yematanho makuru eiyi chiteshi ndeayo hunyanzvi mune alpine skiing: mutambo unosanganisira kuburutsa njanji mune yakarebesa nguva, kutsvaga nzira inonyanya kutenderera. Unogona kuwana zvakanakisa Getaways kuAndorra neEsquiades.com.
Matambiro muBaqueira Beret
Baqueira Beret iri, kana zvichibvira, imwe yenzvimbo dzakakurumbira dzekushambadzira muSpain, sezvo ichipindwa nevanhu vazhinji vanozivikanwa, pakati pavo Mambo Felipe VI pachake anomira. Chiteshi ichi chine huwandu hukuru hwemakwara akagadzirirwa kuchinjaniswa kumatunhu akasiyana evashanyi vayo. Aya makwara anowedzera anopfuura makiromita gumi nemashanu. Inowanikwa muArán Valley, muCatalan Pyrenees, uchishanyira unogona kuitora kuti unakirwewo nenzvimbo dzinoyevedza uye inonaka gastronomy yenharaunda.
Yakagadzika chiteshi ine 97 materu anotsemuka izvo zvinowedzera anosvika makiromita zana nemakumi manomwe nenomwe. Chiteshi ichi zvakare chine maviri emagetsi echando, maviri boardercross uye echando bhodhi. Iyo yakaoma inopawo mamwe masevhisi senge kuyambuka-nyika kusvetuka kana kukwira mabhiza. Chimwe chekusiyanisa maficha eFormigal ndechekuti inogovera pasiti yayo yekupfuura neiyo Panticosa chiteshi, saka haugone chete kutsika muzviteshi zvese asiwo kuzorora mu spa iri mune yekupedzisira. Chiteshi cheFormigal chiri mudunhu reHuesca.
Inowanikwa mudunhu reCerdaña, muCatalonia, La Molina chiteshi idiki muhukuru, asi kwete nekuda kwechikonzero chemhando yepasi. Pakazara, nzvimbo yekutandarira ine 54 materu ayo anounganidza huwandu hwemakumi matanhatu neshanu emakiromita. Chiteshi cheLa Molina chinozivikanwa pasi rese nekugamuchira nhamba yakanaka ye zviitiko zvepasirese munyika yeski. Pakati payo masevhisi zvinokwanisika kuwana kutasva pane vanocheka chando, kubuda kunze pamusoro pemotokari yechando uye sleds, pakati pevamwe.
Iyo Sierra Nevada ski resort inozivikanwa inozivikanwa nekuve imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuSpain. Mumakore apfuura, chiteshi chakasimudzirawo chayo yakakura chirongwa chakanangana nevana. Neiyi nzira, iyo Sierra Nevada yekuvakira ine materu akagadzirirwa maitiro eiyo idiki diki yeimba, pamwe nepaki yekushanya iyo inosanganisira zvinokwezva senge chinotenderera coaster uye chando chinotyaira. En Esquiades.com Iwe unogona kuwana zvese zvinopihwa zvese zveiyo Sierra Nevada chiteshi uye kune vamwe vazhinji vari muSpain, Andorra neFrance.
Cerler chiteshi ndiyo yepamusoro soro chiteshi muAragonese Pyrenees. Inowanikwa muBenasque Valley, Cerler inosiyana nedzimwe nekuti yakakomberedzwa nenzvimbo dzinoyevedza uye nenhongonya dzakakwirira. Saizvozvo, chiteshi cheCerler chine materu makuru iyo inogona kuwanikwa munzvimbo iyi, iri pakati pe 1.500 uye 2.700 metres. Iyo yakaoma ine makiromita makumi manomwe nepfumbamwe emateru anotsemuka, akagadzirirwa madhigirii akasiyana ekudzidza evashanyi vayo.
Hunhu hwesinou ndeimwe yezvakanyanya kunaka nzvimbo yeBoi-Taül resort. Inowanikwa mudunhu reLleida, chiteshi chine huwandu hwakawanda hwekumhanya mutsvuku, saka mazhinji akaomarara ari yakagadzirirwa skiers yepakati uye epamusoro nhanho, kwete kune vanhu vachiri kutanga muitiro wekusvetuka. Chiteshi ichi chinewo nzvimbo yakachengeterwa nzvimbo yechando, inozivikanwa se "freeXperience". Zvakare, chimwe chinhu chakanakira chiteshi cheBoi-Taül ndechekuti kazhinji hachina kuwanda.
Chiteshi ichi chiri pamoyo weAragon Valley, kunyanya mudunhu reJaca. Iyo yakaoma ine nhamba huru yemasevhisi eresitorendi uye makiromita makumi mashanu emateru echikepe. Nekuda kwenzvimbo yayo, iyo Astún ski resort inosanganisa zvakakwana mitambo pamwe nekushanya uye zviitiko zvekuzorora. Nenzira iyi, kutiza kuenda kuAstún kunogona kusanganisira kwakasiyana siyana nzira dzinoenda kure kupfuura kutsvaira..
MuAndorra, iyo Vallnord ski resort iri mumipata yeArcalís neLa Massana. Iwo anodarika makumi matanhatu neshanu maturaki akazara 68 makiromita, akazara ne chando chemhando yepamusoro, Inovimbiswa nenzvimbo yenzvimbo yechiteshi. Iyo yakaoma zvakare ine paki yebhasikoro yevanoda makomo kuchovha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Nzvimbo dzakanakisa dzekutsvedza muAndorra neSpain
Maguta akanaka padyo neBarcelona
Chii chaungaone muBasque Nyika: Kubva Mutambo weZigaro kusvika kune yakakurumbira flysch